अख्तियारका नाममा दलाली गर्दै डा. उपाध्याय – eRoyaltimes
बुझाइमा अन्तर पहाड–मधेसको पीडा
काली नदीको मुहान नै नेपालको आधिकारिक सिमाना
महिलामाथि हुने हिंसा मा पुँजीवाद र सामन्तवादको ठूलो हात छ । -बि.सी.
सङ्क्रमित बढ्दै गएपछि प्रदेश नं २ सिरहामा निषेधाज्ञा जारी
सीमामा आक्रमणको प्रयास, गल्ती औल्याए पछि भारतीय पक्षले माग्यो माफी
मेरी आमा पनि बिहेको बारेमा त्यति चिन्तित हुनुहुन्न। – प्रियंका चोपडा
प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय
अख्तियारका नाममा दलाली गर्दै डा. उपाध्याय
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका ठेकेदार डा। धर्मराज उपाध्यायका कला कर्तुतहरु पर्दाफास हुन थालेका छन् । उनले नेपाल टेलिकमका टावर इक्युमेन्ट लगायत अन्य सामग्रीहरु ठेक्कामार्फत सप्लायर गर्दे आएका छन् । उनले नेपाल टेलिकममा दिने सामानहरु सवै कम गुणस्तुरको भए पनि टेलिकमका कर्मचारीलाई धम्क्याएर असल गुणस्तरको मूल्य लिने गरेका कुरा समेत थाहा भएको छ । जगदम्बा इन्टरनेसनल प्रा।लि।को नामबाट सामान सप्लाई गर्ने उपाध्यायले नेपाल टेलिकमका भ्रष्ट कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा यस्ता नाजायज कर्तुत गर्न सफल हुँदै आएको तथ्य स्रोतले जनाएको छ ।
२०७० सालदेखि नेपाल टेलिकममा विभिन्न टेन्डरको कार्य गरेका उनले केही वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरेको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ । यिनकै दादागिरी अनुसार नायब प्रवन्ध निर्देशक रवीन्द्र झा, अरुण पुरी, देवनारायण यादव र प्रवन्धक सुनील पोखरेल चल्ने गरेका छन् । स्रोत बताउँछ भने यी कर्मचारीहरु आफ्नो नियन्त्रणमा भएको दावी गर्ने उनी नेपाल टेलिकमभित्र जुनसकै काम गर्न पनि सफल हुने बताउँदै हिँड्छन् । नक्कली कागजातको आधारमा अख्तियारको धम्की दिंदै यिनले हालसम्म ५० करोडभन्दा बढीको टेन्डर हात पारिसकेका छन् । उनले विभिन्न समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नक्कली प्रमाणपत्रधारी प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको निवासमा रवीन्द्र झा, सुनील पोखरेल लगायत आफ्नो प्रभावमा रहेका अन्य कर्मचारीलाईं लगी गोप्य बैठक गर्दै आफ्ना काम सिद्ध गर्ने गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । भारतको विहार राज्यअन्तर्गत बैरगनियामा जन्मिएका उपाध्याय उमेर छिप्पिदै गएपछि तस्करी धन्दामा लाग्दै नेपालको वीरगञ्जमा आई बस्न थालेका हुन् ।
नेपालमा आएपछि उनले काठमाडौंमा नक्कली सुर्ती, नक्कली भोड्का, रोयल स्ट्यागलगायत रक्सीहरु सप्लालाई गर्ने गरेको काण्डमा उनी प्रहरी हिरासतमा पनि परेका थिए । उनले अहिले पनि नाम चलेका सुर्तीका नक्कली ब्रान्ड निकालिरहेका छन् । दीप बस्न्यात आन्तरिक राजस्व विभाग प्रमुख रहँदादेखि उनीसँग सम्बन्ध बढाएका उपाध्यायले अहिले पनि नक्कली सुर्ती र रक्सीको धन्दा चलाईरहेका छन् । उपाध्यायले दीप बस्न्यातसँग सम्बन्ध छ भन्दै विभिन्न व्यापारी, उद्योगपति तथा उच्चस्तरीय कर्मचारीलाई धम्क्याउने प्रलोभनमा पार्ने तथा टेण्डर हत्याउने काम गर्दै आएका छन् । त्यस्तै उनले अख्तियारमा मुद्दा परेका कर्मचारीसँग मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै रकम असुली पनि गर्ने गरेका छन् । उनले दीप बस्न्यातकै आडमा धम्क्याएर विभिन्न कार्यालयका टेन्डर लिई अरुलाई समेत दिने गरेका छन् । त्यसबापत उनले बस्न्यातलाई कमिसन टक्र्याउने गरेको स्रोत बताउँछ ।
कसरी बन्यो सम्बन्ध रु भारतीय मूलका उपाध्यायले किर्तेगरी पर्सा जिल्लाबाट नागरिकता लिएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका यिनी आफ्नो व्यावसायिक जीवनको सुरुवाती दिनहरुमा दाल–चामलको कारोबर गर्दथे । सोही समयदेखि दाल चामलमा मसिना ढुंगा मिसाएर बेच्ने कार्य यिनको प्रमुख धन्दा थियो ।
२०५१–२०५२ सालतिर यिनी रक्सीमा पानी मिसाएर नक्कली रक्सीको धन्दामा संलग्न भए । यही क्रममा केही समय प्रहरी खोरमा समेत बिताएका उपाध्यायले विहार र युपीबाट नक्कली प्रमाणपत्र नेपालीलाई बेच्ने धन्दा समेत गरेको स्रोतको दाबी छ। अख्तियार प्रमुख बस्न्यातको शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत आफूले मिलाएको दाबी यिनी आफैले गर्ने गरेका छन् ।
२०६२ मा दीप बस्न्यात आन्तरिक राजस्व विभागको प्रमुख रहँदा विभिन्न व्यापारीक धारणा हालको फाइल मिलाउने मुख्य दलालको भूमिका यिनै उपाध्यायले गर्ने गरेको दावी उनको छ । सोही समयदेखि बस्न्यात र उपाध्यायको सम्बन्ध प्रगाढ बनेको मानिन्छ । प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई सुरा–सुन्दरी र पैसामा फसाएर निरन्तर ब्ल्याकमेल गर्ने कार्य यिनको प्रमुख आधार हो । साभार ( ताजाखबर साप्ताहिक ।
सांगीतिक क्षेत्रमै करिअर बनाउने लक्ष्य लिएको छु नेपालको पुर्वाञ्चल क्षेत्रमा चर्चित एवं उदाउँदो गायक हुन् प्रेम आङदेम्बे । थुप्रै स्टेज कार्यक्रमहरुमा आफ्नो सुमधुर स्वर र गायन क्षेमता प्रस्तुत गर्दै आएका उनले २०६६, मा झापा आइडल तथा पूर्वाञ्चल आइडल २०७३, मा प्रथम स्थान हासिल गरेका थिए भने नेपाली तारा सिजन थ्री […]
पर्यटकीय क्षेत्र ठमेललाई सवारीसाधनमुक्त क्षेत्र घोषणा, राति १० देखि बिहान ५ बजेसम्म प्रवेश
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदलाई समेटेर नयाँ वरीयता क्रम निर्धारण गर्ने तयारी
Royal Times2years ago
यो तथ्यांक राष्ट्रिय र स्थानीय तह स्तरमा पनि बनाउनुपर्छ ।’ – थापा
२० वर्षपछि जनप्रतिनिधिबाट काम सुरु
३९.७७ प्रतिशत सरकारको लगानी खुम्चिएर ९.०१ प्रतिशतमा, २० अर्ब सम्पत्तिमाथि चलखेल
राष्ट्रिय मुद्दामा संलग्न हुन ‘२५ प्लस’ को आह्वान